ပျော်စေအကြံပေးချက်များ - Ningbo BestCleaner Co. , Ltd မှ
BVC Cleaner အကူအညီနဲ့သင်သည်သန့်ရှင်းသောအလုပ်အကိုင်များကိုကြောက်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦး BBQ ပါတီကိုင်ထားပါ။
သငျသညျမိတ်ဆွေစာရေးရှိသည်နှင့်သူတို့ကိုအံ့သြသွားချင်, အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦး BBQ ပါတီ hosting အားဖြင့်သူတို့ကိုအံ့သြသွားသည်မဟုတ်လော သင့်ရဲ့ရှုပ်ထွေးအိမ်သူအိမ်သားအချို့မိတ်ဆွေကောင်းနှင့်အတူသင်၏အချိန်ခံစား၏လမ်းရဖို့မသွားပါစေပါနဲ့။ ဒီနေရာတွင်သင့်အိမ်၌သန့်ရှင်းရေးကိုကူညီမယ့်5ခြေလှမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည် - မပါစိတ်ဖိစီးမှုရုံလွယ်ကူသော-to-အောင်မြင်ရန်တာဝန်များကို။ ဒီတော့ဘယ်မှာစတင်ရန်? တစ်ဦး BBQ ပါတီအဘို့, ဧည့်သည်များပြင်ပတွင်မိမိတို့၏အချိန်အများစုကိုဖြုန်းပါလိမ့်မည်, ဒီတော့အိမျတျော၌ဆေးကြောသန့်စင်ဖို့အရေးအပါဆုံးဒေသများအခန်းတစ်ခန်း, မီးဖိုချောင်နဲ့ရေချိုးခန်းအသကျရှငျ, အဝင်ပေါက်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုလုံးကိုအိမ်သူအိမ်သား clean မဟုတ်ဘဲပါတီလမ်းကြောင်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့မလိုအပ် - လူအများစုရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုစားပွဲ, စင်ပေါ်နှင့်၎င်းတို့၏အချိုရည်သတ်မှတ်ထားဖို့သောအရပ်တို့ကိုမအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
1. လတ်ဆတ် & သင့်ရဲ့တိုက်ခန်း Declutter ။
ကကောင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအစှဲစေရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောင်ဒါကြောင့်သင့်ဧည့်သည်များမြင်ရပါလိမ့်မည်ကိုပထမဦးဆုံးအရာသည်သင်၏ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်အမှိုက်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရတဲ့ပြင်ပတစ်ဦးအမြန်မောင်းလုပ်ပါ။ ထိုအခါအတွင်းမှသင့်ရဲ့လမ်းစေနှင့်သင့်ဝင်ပေါက်ခန်းမပတ်ပတ်လည်တစ်ဦးမောင်းပြုမဆိုစုပြုံပြွတ်သိပ်ရှင်းလင်းရေးနှင့်မျက်မှောက်ထဲကဖိနပ်, အကျီ, ဦးထုပ်နှင့်မေးလ်ချပြီး။ စားပွဲသို့မဟုတ်အလှဆင်တ္ထုကိုချွတ်မွမှေုနျ့နှငျ့အခြို့သော deodoriser ကိုလေပေါ်မှာပ။
(- သင် BVC ထုတ်ကုန်မဆို အသုံးပြု. ပြီးနောက်ဒီလိုလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သို့သော်မည်သည့်အစွန်းအထင်းထဖုံးအုပ်ဘို့ကြီးသော), မွေ့ရာပေါ်မှာလျောင်းဖြော, နေရာပစ္စည်းများထဲကတစ်ခုခုထကောက်နေသဖြင့် Start ကူ, ခေါင်းအုံးနှင့် refolding လှဲ။ , Next ကိုတစ်ဦးအားမိုက်ခရိုအထည်ကို အသုံးပြု. စားပွဲ, တီဗီဖန်သားပြင်နှင့်အခြားဖုန်ထူမျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာမဆိုဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆံပင်တက်ဖုန်စုပ်, သင်၏လေဟာနယ်ရဲ့ဖြီးသို့မဟုတ်ရေပိုက်ကို attachment သုံးပြီးသင့်ရဲ့အင်္ကျီပျဉ်ပြားရှင်းလင်းဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။
တိုက်ခိုက်မှု၏ပထမဦးဆုံးအချက်တစ်ခုခုညစ်ပတ်ဟင်းလျာများသင့်ရဲ့စုပ်ရှင်းလင်းရေးစတင်နိုင်ရန်ဖြစ်၏ သင်တစ်ဦးပန်းကန်ဆေးစက်ရှိပါကရုံသူတို့ကိုတစ်ဦးလြျှောပေးနှင့်၌သူတို့ကိုသီးနှံများကိုပုံထိုအခါစုပ်ကောင်းတစ်သန့်ရှင်းရေးပေး - ။ သင်ပြုသောအမှုဖွင့်သည့်အခါအင်တုံ shimmering တစ်ဦးအစက်မရှိသောဖြစ်သင့် - ထို BVC သန့်စင်စင်စစ်ကဒီအလုပ်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မည်! ထို့နောက်သင့်ရဲ့တန်ပြန်ထိပ် clean မလိုအပ်သောကရိယာကွာထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်မီးဖိုချောင်မှုန်ရေမွှားနှင့်တစ်ဦးအားမိုက်ခရိုအထည်သို့မဟုတ်တစ်ခါသုံး Wipe နှင့်အတူကောင်တာကိုဆင်းသုတ်။ သင်သည်သင်၏မီးဖို, ဗီဒိုများနှင့်ရေခဲသေတ္တာများအတွက်တူညီလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ appetisers, အချိုရည်များနှင့်အခြား၎င်း၏ Goodies များအတွက်အခန်းတစ်ခန်းအောင်များအားပြန်လည်စီစဉ်ခြင်း, သင့်ရေခဲသေတ္တာအတွင်းပိုင်း clean up လုပ်ဖို့အကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရေနွေးငွေ့သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင် spick နှင့် span ဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်ကြမ်း။
5.Last သော်လည်းမအရှိဆုံးအရာရေချိုးခန်း Sanctuary clean
နောက်ဆုံးအဘို့အရေးကြီးဆုံးအခန်းကိုစွန့်ခွာ - ရေချိုးခန်းသင်တို့အပေါ်မှာသင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများစုအာရုံစိုက်သင့်တယ်အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဤသင်သည်သင်၏လက်ဒူးထောက်ချရရန်ရှိသည်များနှင့်ကြမ်းပြင်ပွတ်တိုက်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲအများစုဧည့်သည်များအိမ်သာ, မှန်, စုပ်နှင့်တန်ပြန်နဲ့တူကိုသုံးပါလိမ့်မယ်အရာတို့ကိုသန့်ရှင်းရေးမဆိုလိုပါ။ ဝေးစုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အားလုံးဖောက်ကောင်တာပစ္စည်းများကိုဗီဒိုထဲသို့သို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမျက်မှောက်ထဲကထုပ်ပိုးခြင်းဖြင့်စတင်ပါ, ကောင်တာများနှင့်တစ်ဦး All-ရည်ရွယ်ချက်သန့်စင်ခြင်းသို့မဟုတ် BVC Cleaner နဲ့ကောငျးတဲ့သန့်ရှင်းရေး mirror ။ ထိုင်ခုံ, အနားကွပ်များနှင့်အပြင်ပန်းအပေါ်, အတွင်းအပြင်, သင်တစ်ဦးလတ်ဆတ်သောတဦးတည်းနှင့်သင်၏လက်ရှိအိမ်သာလိပ်ကိုအစားထိုးသေချာ - Next ကိုသင့်ရဲ့အိမ်သာသန့်ရှင်းရေး။ ကြောင်း spa ခံစားမှုကိုဖန်တီးရန်အချို့သော deodoriser တစ်ခုသို့မဟုတ်ရနံ့ဖယောင်းတိုင်ထည့်ပါ။ ဒါ့အပြင်အသစ်လတ်ဆတ်နှင့် fluffy လက်သုတ်ပုဝါကိုထုတ်ထားပါရန်မေ့လျော့ကြပါဘူး။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ကောင်းတစ်ဦးရေနွေးငွေ့ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်ပေးနှင့်သင်အားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီ။
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့5ခြေလှမ်းအစီအစဉ်နှင့်အတူပြုလုပ်သကဲ့သို့လွယ်ကူ - သန့်ရှင်းရေးသင့်ရဲ့ပါတီ prep အချိန်လမျး၌အရမသွားပါစေပါဘူး။